RPA - NewGenApps - DeepTech, FinTech, Blockchain, Cloud, Nhare, Ongororo
Robotic Maitiro Ekushandisa
iyo otomatiki yemitemo-yakavakirwa mabasa pamwe nekushandisa kweyakaomesesa software mhinduro dzinoderedza kutsamira kwevanhu pane chiitiko chebasa. Uine rubatsiro rweRPA, unogona kushandura aripo madhatabhesi muzvishandiso (, ERPs, Vatengi Tsigiro Systems, nezvimwewo) pasina kugara uchitariswa. Nekushandisa ungwaru hwekunyepedzera, izvi zvinogona kudzidza kubva pamhinduro dzazvino nekuzvivandudza. At NewGenApps isu takagadzira otomatiki chikuva icho chisingagone chete nemashandisirwo ekugadzirisa asi zvakare neakangwara chatbot maturusi. RPA neAI inogonesa matekinoroji ari kugadzira mikana mikuru yekukura kwebhizinesi uye inogadzira hutsva nemikana. Mabhizimusi ane shungu dzekutsvaga kugona kweaya matsva AI mhinduro uye nekuona mabhenefiti avo.
Nei RPA Yakarurama
Kamwe ikarongedzwa zvakanaka, software idzi dzinobvisa mikana yekukanganisa kwevanhu mukuita nekungwara kuvandudza mashandiro avo pahwaro hwemhinduro dzakagamuchirwa. Nekuda kwekuganhurirwa kwekutarisa spans uye mapusa asina kuverenga, ivo vanogadzira yakakura yakasarudzika mukana kune mabhizinesi.
Deredza Bhizinesi Rekushandisa Mari
Mari dzinowanikwa pakuita bhizinesi dzakadzikiswa zvakanyanya seimwe software inokwanisa kubata basa revashandi vazhinji. Izvi zvinoponesa nguva yevashandi kune mamwe mabasa akaomarara. Kune zvakare kune yakaderera mutengo unoitiswa yekuhaya uye kuchengetedza vashandi.
Iwe haufanire kuhaya vashandi vatsva pese panenge paine spurt mu data. Marobhoti / maSoftwares akagadzirirwa mabasa akadaro anogona kubata ese marudzi ekukwira nekudzika mu data. Icho chokwadi chekuti iwe unogona kushandisa yakadaro otomatiki software 24 * 7 uye 365 mazuva pagore, mukana wakakura.
Kuderedzwa muKudzidziswa uye Kubudirira Mari
Iwe haufanire kudzidzisa vashandi vatsva kumhanyisa kunyorera kwako kubva pakutanga. Vashandi vanogona kudzidziswa nezve kunze kwekubata uye mamwe mabasa ekuongorora. Nekudaro, kukura kwemushandi wako kwakanangidzirwa zvakanyanya pakufunga kwepamusoro pane pakuita basa rekugunun'una.
Kuchengeta izvi zvinangwa zvebhizinesi mupfungwa, NewGenApps yakagadzira chizvarwa chitsva cheA automation chikuva kubatsira mabhizinesi kuzadzisa izvi. Isu takabatsira Mabhizinesi kudzikisa mutengo wekushanda neanopfuura makumi mana muzana uye kuwedzera kukosha kwebhizimusi kuburikidza neMutengo-kuchengetedza, Kuwedzera mukugadzirwa, Kuderedza munguva yekudzosa, Kuwedzera kushanda kwemabatiro etc. Neboka rakazvitsaurira revagadziri vane ruzivo, isu tinokwanisa kuwedzera matekinoroji emazuva ano kuti akupe mibairo yakanaka. Yedu Yekushandisa Platform ine kugona kupa -
1. Deterministic kutonga-kwakavakirwa otomatiki (RPA)
2. Artificial Intelligence uye Kudzidza kweMuchina kwakagonesa mhinduro.
3. Intellibot: Iyo Chatbot chikuva yekugadzira yakapusa chatbots mumaminetsi.